फोहोरको पोको बोकेर फुत्त जहाँ पायो त्यहिँ फालेर हिड्नेहरु सावधान? होस् गर्नुस्, ५० हजार रुपिया जरिवावानामा परिएला ! – Etajakhabar
फोहोरको पोको बोकेर फुत्त जहाँ पायो त्यहिँ फालेर हिड्नेहरु सावधान? होस् गर्नुस्, ५० हजार रुपिया जरिवावानामा परिएला !
काठमाडौँ । अरूको आँखा छल्दै फोहोरको पोको बोकेर कता लाग्दै हुनुहुन्छ ? कतै बाटोघाटो, चौबाटोको मोड र छिमेकीका घरढोकाअगाडि फोहोरको पोको बिसाउने मनशाय त छैन ? यसो हो भने महानगरीय प्रहरी परिसर र काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरी टोलीले तपाईंलाई सीसीटीभीबाट पहिचान गरी ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । महानगरपालिकाले यो प्रयोजनका लागि प्रहरी परिसरलाई पाँच करोड ८० लाख रुपियाँ अनुदान सहयोग गरिसकेको छ । प्रहरी परिसरको सडकमा जडित सीसीटीभी विगतमा अपराध अनुसन्धान र ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रयोग हुँदै आएको थियो ।
प्रवक्ता सिंह भन्नुहुन्छ, “अब फोहोर फाल्नेलाई पटकैपिच्छे ५० हजार रुपियाँ जरिवाना हुन्छ । जडित सीसीटीभीबाट यस्ताको पहिचान गरेर घरडेरामै पुगेर कारबाही गरिन्छ । ” नेपाल प्रहरीले सीसीटीभी जडानका लागि बोलपत्र नै आह्वान गरिसकेको छ ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सरोज आचार्यले लेखेका छन् ।
Posted on: Tuesday, July 16, 2019 Time: 7:49:31